Mpiaro Ny Zon’Olombelona Saodiana Niatrika Ny Haratsian’ny Mpanao Fanadihadiana Sy Ny Mpitsara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2013 4:20 GMT
Ity dia isan'ny fanadihadiana manokana ataonay momba ireo mpanavao ny rafi-pitsarana any Arabia Saodita
Natao tany Buraidah, Arabia Saodita ny andiany faha-telo tamin'ny fitsarana an'i Umar Al-Saeed omaly [18 Aogositra] . Umar Al-Saeed, mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny mpiaro ny zon'ny olon-tsotra sy ny mpanao politika (ACPRA) dia notanana am-ponja tamin'ny 28 Aprily fa nandà tsy hanatrika ny fakàna am-bavany tsy misy mpisolovava.
Nasiana rojo vy (menotte) i Umar Al-Saeed tamin'ny andiany faharoa. Nitarainany ny faharariana naterak'io rojo vy io nefa tsy nanaiky ny hanesorana izany ny mpitsara Eisa Al-Matroudi.
Raha nanomboka niditra ny efitrano fitsarana ireo mpanatrika, dia nomen'ny mpitsara baiko ny mpitandro filaminana hanodidina an'i Al-Saeed, ary tsy navelany hipetraka teo akaikiny i Abdullah Al-Saeed sy i Eisa Al-Hamed mpisolovava azy. Ankoatra izay dia tsy navelany niara-nipetraka ihany koa ireo mpisolo vava roa ireo.
Nanontany an'i Al-Saeed, mpikambana tanora indrindra voasambotra tao amin'ny ACPRA, ny mpitsara momba ny iray amin'ireo fiampangana, ny “Fitsikerana ny lalàna”; nanandrana ny niresaka tamin'ireo mpisolovava azy i Umar Al-Saeed. “Nahoana ianao no mila ny fanampian'ireo mpisolovava anao amin'ny valim-panontaniana ? Tsy lehilahy ve ianao ?” Hoy ny fanontaninan'y mpitsara mandrahona. Tsy nety namaly i Umar avy eo fa nitaky ny fampitsaharana ireo fanambaniana. Efa nitarainany ny fanambaniana nataon'ny mpanao fanadihadiana teo aloha.
Nandritra ny fitsaràna dia nisy mpanatrika iray, Mohammad Al-Rabiah [@mohad_f], niteny tamin'ny mpitsara fa tsy ara-dalàna ny tsy fahazahoan'ny voampanga sy ny mpiaro azy tsy hiresaka. Nantsoin'ny mpitsara hipetraka eny akaikiny i Al-Rabiah ary natolony azy ny bokin-dalàna momba ny heloka bevava, ka nasainy notondroiny ny andiany izay manakana ny mpitsara tsy hanao izany.
Nisy mpanatrika fitsarana iray hafa, Muhammad Al-Ahmad, voaroaka hivoaka:
Noroahan'ny mpitsara noho ny siligaoma aho tao amin'ny fitsarana an'i Umar Al-Saeed ! Hafahafa, tsy niteny tamiko izy, fa ny mpitandro filaminana no niteny fa baikon'ny mpitsara izany.
Tsy nahazo alàlana hanatrika ny fitsaràna i Bayan Al-Bjadi [@Urooobh_] sy i Jinan Al-Ghaith [@JMNG6]. Nolazain'ny mpitandro filaminana fa tsy tian'ny mpitsara hiditra ao ny vehivavy ary dia nasainy nody izy ireo. Tsy nety nody anefa izy ireo fa niandry teo ivelany teo mandra-pahavitan'ny fitsaràna.
Nibitsika i Bayan :
Na dia tsy afaka miditra ao amin'ny fitsarana aza izahay dia sahala amin'ny hoe efa tao. Ary hanatrika foana izahay mandra-pahazahoanay alàlana.
Tsy voalohany izao no nandraràn'ny mpitsara ny vehivavy tsy hanatrika fitsaràna. Lazain'ny mpibitsika sasany fa efa mahazatra izany fanavakavahan'ny rafi-pitsarana ny vehivavy izany :
Ny fikirizana dia ny fankanesan'ny vehivavy any amin'ny fireneko any amin'ny fitsaràna na dia fantany aza fa tsy havela hiditra izy noho ny fanavakavahan'ny fitsarana ny vehivavy.
Araka ny filazan'ireo mpanatrika ny fitsarana, dia nasain'ny mpitsara nangataka ny fanoloana azy izy fa tsy te-hanohy intsony ity raharaha ity. Tena sorena izy ka tsy nametraka daty hanaovana ny andiany manaraka. Tsy nisy firaketana an-tsoratra nosoniavin'ny voampanga sy ireo mpisolovava.
Mpikambana enina ao amin'ny fikambanan'ny zon'ny olon-tsotra sy mpanao politika no mbola any am-ponja any Arabia Saodita. Isan'izany Mohammad Al-Bjadi, izay efa navotsotra tamin'ny 6 Aogositra ary nosamborina indray noho ny antony tsy mazava ny 14 Aogositra.